ဂီတ — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
သူ့သတင်းစကားကိုဖျောပွနိုင်ရန်အတွက်, ခရီးစဉ်တစ်ဝှမ်းဤအချိန်ကိုမှတ်တမ်းတင်ဖို့တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားချဉ်းကပ်ယူ. အဲဒီအစားမျိုးစုံထုတ်လုပ်သူများနှင့်အတူပူးပေါင်း၏, သူသည်မိမိအအတ္တလန်တာစတူဒီယိုမှာတစျခုလုံးကိုအယ်လ်ဘမ်များအတွက်သက်တမ်းကြာထုတ်လုပ်သူ Gawvi နှင့်အတူတစ်ခုတည်းကိုသာအလုပ်လုပ်ခဲ့. Sonic, ထရဲ့ပထမဦးဆုံးတစ်ခုတည်း “Shweet” Gawvi နှင့်ခရီးစဉ် Lee ကနှစ်ဦးစလုံး၏ဧရာမအခွက်တဆယ်ကိုဖော်ပြပေး. ၎င်း၏တကျီကျီထုတ်လုပ်မှုနှင့်အတူ, နယူးယောက်စတိုင်ပုံပြောခြင်းနဲ့ဂန္ချတောင်ဘက်ဟူစတန်တုံဖို့လမ်းကြောင်း nods. ခရီးစဉ်ရဲ့ကျမ်းပိုဒ်သူတို့အရေးပါလှပေသည်ကဲ့သို့ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းရှိနေဆဲ. ဤအတောအတွင်း, “ချိုမြိန်အောင်ပွဲခံ” ခရီးစဉ်ရဲ့ကူးစက်စီးဆင်းကိုင်ကြာအဖြစ်အနည်းဆုံးကျမ်းပိုဒ်ကနေချက်ချင်း invigorating ရဲ့တစ်ဦးသိမ်းကျုံးချိတ်သို့တည်ဆောက်. “က Manolo” သူ့ကိုတစ်ဖန်ရော Records ကိုအတူတက်ရှိနေသေးသည်ကိုမြင်’ ကိုယ်ပိုင်အဓိကလူနှင့်ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေ Lecrae. အတူတူ, သူတို့ထဲကနှစ်ဦးကိုပါးနတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ယက်ကဗျာကိုမီးရှူးမီးပန်းများအကြားအခြား hip-hop ပါရာဒိုင်းလှန်.